Umbhoshongo Wemimoya: isikhumbuzo semeteorology | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Umuntu uhlale elangazelela ukwazi zonke izinto eziguqukayo ezithinta isimo sezulu nesimo sezulu sendawo. Umoya ubungezinye zezimo zezulu ezavusa intshisekelo enkulu ngoba ibingalinganiswa kahle futhi ingabonwa ngamehlo. Ngokuya ngalokhu kuguquguquka, ngaphezu kweminyaka eyizinkulungwane ezimbili ngemuva kokwakhiwa, kusamile. Imayelana ne- umbhoshongo wemimoya. Itholakala endaweni yasePlak e-Athene eduze ne-Roman Agora kanye naphansi kwe-Acropolis. Kungokwakhiwa kokuqala kuwo wonke umlando obe kuhloselwe ngokukhethekile ukwenza imisebenzi yokubuka ku-meteorology.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela wonke umlando, izici nokubaluleka kombhoshongo wemimoya.
2 Umsuka wombhoshongo wemimoya
3 Ukwakhiwa kombhoshongo wemimoya
Yaziwa nangokuthi yi-Horologion noma i-Aérides, yakhiwa ngumakhi wezinkanyezi u-Andrónico de Cirro ngekhulu lokuqala BC. C., ethunywe ngumakhi wezakhiwo uVitrubio nosopolitiki waseRoma uMarco Terencio Varrón. Inecebo elinezinhlangothi ezine futhi ine ububanzi bamamitha ayi-7 nokuphakama cishe kwamamitha ayi-13. Ingesinye sezici eziyinhloko lesi sakhiwo esinaso futhi esisenza sihluke. Futhi ukuthi kuyisakhiwo esisebenzise ukusetshenziswa okuningi. Ngakolunye uhlangothi, kwakuyithempeli elalinikezelwe ku-Aeolus, owayenguYise Wemimoya ezinganekwaneni zamaGrikhi, ngakho-ke lalisebenza emkhakheni wezenkolo. Ngakolunye uhlangothi, bekuyindawo yokubuka lokhu kuguquguquka kwesimo sezulu, ngakho-ke futhi ibinomsebenzi wayo wesayensi.
Umoya ngamunye owawuqubuka eGrisi yakudala wahlonzwa njengoNkulunkulu futhi bonke babengamadodana ka-Aeolus. KumaGreki asendulo kwakudingeka impela ukwazi izici nemvelaphi yemimoya. Babefuna ukwazi ukuthi imimoya ivelaphi ngoba bekuyidolobha lokuhweba elihamba oLwandle iMedithera lisebenzisa useyili. Impumelelo nokwehluleka komsebenzi wentengiso kwakuxhomeke kakhulu emoyeni. Kujwayelekile ukuthi ngezikebhe ezihamba ngomkhumbi umoya noma uzodlala indima ebalulekile ekuthuthweni kwempahla. Zonke lezi bekuyizizathu ezanele zokufuna ukutadisha ngokujulile konke mayelana nemimoya. Yilapho ukubaluleka kombhoshongo wemimoya kuvela khona.
Iqiniso lokuthi iTower of the Winds lakhethwa eduze kwe-Roman Agora (isikwele semakethe) alizange libe ngengozi nakancane. Abathengisi babenomthombo wolwazi oluwusizo ngezintshisakalo zabo futhi babengenza ukushintshana okungcono.
Umsuka wombhoshongo wemimoya
Njengoba sibonile, umoya wawungenye yezimo zezulu ezazifunwa kakhulu ngaleso sikhathi. Abathengisi babengaba nomthombo omuhle wolwazi owusizo kakhulu kuzintshisekelo zabo. Kuncike lapho bekuvunguza khona umoya, ukubambezeleka noma ukuqhubekela phambili kweminye imikhumbi echwebeni kungalinganiselwa. Wayekwazi nokuthi cishe kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi izimpahla zakhe zifinyelele kwezinye izindawo.
Ukuthola ukuthi uhambo oluthile lwalunenzuzo yini, kwasetshenziswa ukuguquguquka komoya. Uma ubudinga ukwenza uhambo oluthile ngesivinini esikhulu nangokuphuthuma, ungahle uhlele umzila owodwa noma omunye kuye ngamandla namandla nohlobo lomoya owawuphephetha.
Ukwakhiwa kombhoshongo wemimoya
Isici esiteleka kakhulu embhoshongweni wemimoya sisengxenyeni ephakeme kakhulu. Ngayinye yezingubo eziyisishiyagalombili zombhoshongo ifinyelela umvuthwandaba nge-bas-relief engaphezudlwana kwamamitha amathathu ubude. Lapha umoya umelwe futhi kulowo nalowo kubukeka sengathi yilowo ohamba usuka lapho ubheke khona. Imimoya engu-8 ekhethwe ngu-Andrónico de Cirro ihlangana kakhulu naleyo yekhampasi ka-Aristotle. Ake sibone ukuthi yimiphi imimoya etholakala embhoshongweni wemimoya: IBóreas (N), Kaikias (NE), Céfiro (E), Euro (SE), Notos (S), Lips or Libis (SO), Apeliotes (O) neSkiron (NO).
Uphahla oluyindilinga ngokuyisisekelo lwalusuka embhoshongweni futhi lathweswa umqhele wesithombe sethusi esasizungeza iTriton God. Lesi sibalo seTriton God sasisebenza njengesifo sezulu. I-vane vane isetshenziselwa ukwazi ukuthi umoya uqonde ngakuphi. Esandleni sakhe sokudla wayephethe induku eyayibonisa ukuthi umoya uqonde ngakuphi futhi ikwenze ngendlela efana nalokhu okwenziwa umshudo wesimo sezulu esivamile. Ukuze uqedele imininingwane ngomoya otholwe endaweni yokubuka, bekukhona ama-quadrants elanga kuma-facade atholakala ngaphansi kwama-friezes. La ma-quadrants ayenobuthakathaka bemfundiso futhi asivumela ukuthi sazi isikhathi sosuku lapho umoya uvunguza khona. Ngakho-ke babekwazi kahle ukuthi amafu amboze nini ilanga nesikhathi esebenzisa iwashi lokubacindezela.
Ngoba leli tshe lesikhumbuzo lisesimweni esihle, linikezwa ukuhlola nokufunda ngokunethezeka nangemininingwane. Akungabazeki ukuthi esinye sezikhumbuzo zesayensi ezindala kunazo zonke ezaziwayo. Izinhloso eziyinhloko zalo mbhoshongo zaziningana. Bakhonze ukukala isikhathi siqhubeka ukunyakaza kokuhamba kwelanga kanye nezikhathi ezithile ngenxa yama-quadrants aqoshwe ezinhlangothini zalo eziyi-8. Lezi zinhlangothi zakhiwe ngemabula ye-pantelic. Ngaphakathi bekukhona iwashi lamanzi okusasele izinsalela futhi ungabona amapayipi aholele amanzi avela emithonjeni esemithambekeni ye-Acropolis kanye nalawo anikeze ukuphuma okweqile.
Kwakuyi-hourglass ekhombisa amahora osuku lapho kunamafu nasebusuku. Uphahla lwakha uhlobo lwenhlokodolobha yephiramidi ye- ama-slabs amatshe anamalunga we-radial ahlanganiswe namathayili. Sekuvele kusenkabeni lapho kuphakama khona i-vane yesimo sezulu esime njenge-newt noma obunye ubuNkulunkulu basolwandle.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngombhoshongo wemimoya kanye nezici zawo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Umbhoshongo wemimoya